Wire harato factory, mpamatsy - China Wire harato mpanamboatra
GREVY WIREAGES HEVAGONAL GALVANIZED
Galvanized hexagonal wire harato, azontsika atao ihany koa ny manonona harato hexagonal harato, harato akoho amam-borona, harato bitro mitafo na harato akoho amam-borona. Vita amin'ny tariby vy ambany karbona, ny fitsaboana manokana azy, toy ny galvanis, dia manohitra.
Galvanized rojo rohy harato dia fantatra koa amin'ny hoe galvanized diamondra tariby harato na galvanized tariby harato harato.
Ny saha Fefy dia tonga lafatra amin'ny fananana biby fiompy, ary misy vaky kely kokoa eo akaikin'ny tany hisorohana ny lozam-pifamoivoizana avy amin'ny biby mandingana ny fefy. Ny fefy an-tsaha dia amboarina amin'ny alàlan'ny vy vita amin'ny vy, namboarina fa tsy amboarina, miaraka amin'ny crimps fanitarana mba hanampiana ny fefy hivezivezy sy hifanaraka amin'ny tany.